Xog: Yaa Xasuuqay Shacabka lagu laayay Beer ku taala Deegaanka Bariire ee Shabeeladda Hoose,?+Sawiro – Hornafrik Media Network
Xog: Yaa Xasuuqay Shacabka lagu laayay Beer ku taala Deegaanka Bariire ee Shabeeladda Hoose,?+Sawiro
illaa iyo 10 qofood oo Rayid ah ayaa lagu dilay Gudaha Beer ay ku lahaayeen Duleedka Deegaanka Bariire ee Shabeelaha Hoose, Waxaana Dadkan oo aan hubaysnayn gudaha Beertooda ugu galay Ciidamo Soomaali ah oo uu watay Sarkaal lagu magacaabo Sheegoow oo ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, isla markaana horay uga soo goostay Alshabaab.
Sheegoow oo laf ahaantiisu horkacayay Ciidanka ayaa lagu waramayaa in Dadkan markii ay gudaha Beerta ugu galeen ay ka wada xireen Indhaha, kadibna mid mid u waydiiyeen Qabiilkooda. Waxaana markaasi kadib uu Sheegoow amray Ciidankiisa inay goobta ku toogtaan.
Saraakiil iyo Askar ka tirsan Shirkadda Bancroft Development oo la socday Ciidanka Soomaalida ah oo aan aqoon waxa lagu wada hadlayo ayaa loo sheegay inay ka mid yihiin Maleeshiyaadka Alshabaab ee soo weerara Ciidamadda ku sugan Bariire, taasoo aan waxba ka jirin. Waxaana kadib ay Ciidamadda uu watay Sheegoow ka gaysteen Gudaha Beerta Bililiqo, iyagoo qaatay wax kasta oo halkaasi yaalay.
Dadka la xasuuqay ayaa waxaa ku jiray 2 Walaalo ah, Caruur Saqiiro ah, Shaqaale ka shaqaynayay Beerta, iyadoona gabi ahaanba 10-kii qof ee halkaasi joogay goobta lagu dilay.
Maydadka Dadka la xasuuqay ayaa waxaa la keenay Isbitaalka Madiino ee Muqdisho, Waxaana halkaasi kula hadlay Warbaahinta Eheladda Dadkii la xasuuqay oo dalbaday in Cadaaladda al hor keeno kuwii gaystay Falkan waxashnimadda ah. Waxaa sidoo kale goobta tagay Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Somalia oo uu horkacayay Xildhibaan Mahad Salaad oo soo xog waraystay Eheladda Dadka la xasuuqay.
Shirkadda Bancroft Development oo xasuuqa Shacabkan qayb ka ahayd ayaa waxaa iska leh Micheal Stock oo ah Maraykan. Waxaana ay ka caawisaa dhinaca Tababaradda, iyo Khuburadda Ciidamadda Midowga Afrika iyo Ciidamadda Somalia.
Milkiilaha Shirkadda Bancroft ee wax ka xasuuqday Shacabka Bariire.
Waa dhacdadii labaad oo dad rayid ah ay ku xasuuqaan Ciidamo Mareykan ah oo howl gal ka fulinaya Koofurta Soomaaliya, waxaana todobaad ka hor ay aheyd markii illaa 7 ruux lagu dilay deegaan u dhow Jilib, halkaasoo diyaarado laga leeyahay Mareykanka ay duqeeyeen.
Ma jirto illaa iyo hadda wax war ah oo ay dhacdadan ka soo saartay Dawladda Somalia. Waxayna dad badan u arkaan qalad kale in Dowladdu ay ka aamusto xasuuq intaan le’eg oo loo gaystay Dad shacab ah.
Caruur ka mid ahayd Dadka Bariire lagu xasuuqay
Magacyadda Dadkii la xasuuqay
Maraykanka oo Duqayn ku dilay Dad Shacab ah Gobalka Shabeelaha Hoose.
Xog: Masuul ka tirsan Madaxtooyo Somalia oo xabsiga ay u taxaabeen Ciidamadda NISA, kadib markii uu ka dhex hadlay Masjidka Madaxtooyadda.